Ogaden News Agency (ONA) – Wafti balaadhan oo uu hoggaaminayo Gud. ku xigeenka JWXO oo gaadhay San Diego
Posted by ONA Admin	/ May 22, 2013
San Diego: Waxaa caawa gagidda dayuuradaha ee magaaladaSan Diego kasoo dagay wafti balaadhan oo uu hoggaaminayo guddomiye ku xigeenka Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia mudane Maxamed Ismaciil Cumar iyo guddomiyaha Abaabulka iyo Arrimaha Bulshada mudane Maxamed Cabdi Yaasiin ‘Diirrane’.
Waftigan ayaa waxay u yimaadeen iney ka qayb-galaan shir weynaha ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardeyda Ogadenia (OYSU) oo barri haddii alle idmo si toos ah uga furmi doona magaaladaSan Diego.
Wafdigan ayaa waxaa garoonka ku soo dhoweeyey qaar ka mid ah shacab weynaha Soomaalida Ogadenia oo uu hor kacayey guddoomiyaha Jaaliyadda San Diego mudane Cabdinasir Cabdullahi Faarax iyo xubno sar sare oo ka mid ah ururadda bulshada.
Waxaa kaloo iyana si diirran horraantii maanta loo soo dhoweeyey musharaxa xog’hayaha guud ee OYSU mudane Cabdicasiis Xassan iyo wufuud kale oo ka kale yimid gobolada Mareykanka sidaTexas,DenveriyoMinneapolis.
Dhamaan wufuuda iyo marti sharafta ayaa kadib waxaa loosii qaaday casho sharaf iyaga oo halkaa lagu kala qaatay warbixino iyo iswareysiyo.
Wararka iyo akhbaaraha shirka halkan kala soco.
By; Cabdiraxmaan Hollywood.